DESIGN SERVICE – GREAT MEDIA
How can we buy this packages?
Have Content Update Service?
Website ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ပို့စ်ကို ကိုယ်တိုင်တင်နိုင်အောင် Training သေချာလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ သက်ဆိုင်ရာ website အတွက်ပြင်ဆင်ပုံကို PDF နှင့် အချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်အောင် လဲပြုလုပ်ပေးပါတယ် ခင်ဗျ။ Design ကို လဲ အတတ်နိုင်ဆုံး user friendly ဖြစ်အောင် ရေးဆွဲပေးတာကြောင့်နားလည်လွယ်ပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီ package ထဲမှာ unlimited hosting နဲ့ domain အတွက် 1နှစ်စာပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ Free Training ရယ် facebook account တစ်ခု gmail အကောင့်တစ်ခု။ လုပ်ငန်း အမည်ပါတဲ့ Page တစ်ခုနှင့် group တစ်ခုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ google map ပေါ်မှာ သင့် လုပ်ငန်း ကို ရှာဖွေလို့ရအောင်လဲ ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ် ဒီ ၀န်ဆောင်မှုလေးကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် Hotline:09775271084 ကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းပြီး Appointment ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြင့် သေချာဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်တဲ့ ပုံကြမ်းကို တစ်ပတ်အတွင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ၄ပတ် ကြာချိန်အတွင်းမှာ website အဆင်ပြေချောမွှေုပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်အထိ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်နော်။ အလုပ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပါက ၀န်ဆောင်ခရဲ့ တစ်ဝက်ကို ပေးချေထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ် Content Update ပြုလုပ်လိုသူ customer များအတွက် လစဉ်အလိုက် ၀န်ဆောင်မှုအပြင် post တစ်ခုချင်း page တစ်ခုချင်းအလိုက် ကိုယ် လိုအပ်သလို ၀န်ဆောင်မှုမျိုးကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Quotation ကို sales@great-media.net (Email) ကနေတစ်ဆင့်လဲ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
We already served following Websites
MEGA9Co,. Ltd.
Great Media Co,.Ltd.
© 2018 GREAT MEDIA – All rights reserved